AIRTOX Kabaha badbaadada TR55 - AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada TR55
Kabo ammaan oo qurxoon oo leh raaxo la yaab leh iyo badbaado
Kuwa aadka u horumarsan Airtox style TR55 waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: WHITELAYER® - adag sida birta oo jilicsan sida maro. Iyadoo WHITELAYER®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad wax ku ool ah oo ka dhigaysa TR55 marka laga reebo nooc kasta oo kale oo kabo badbaado ah oo aad garan karto maanta.
Sare waxaa lagu sameeyaa maqaar nubuck oo la neefsanayo marka lagu daro dharka la bixiyo PowerBreeze® technology.
Taam ahaanshaha qaabkani wuu ka sarreeyaa maadaama injineeradayadu ay ku guuleysteen abuurista taam aad u ballaaran, ciyaaraha fudud oo kabaha ka dhigaya mid la mid ah galoofiska.
WHITELAYER® oo la socda Airtox Nidaamka AIR-3.0, wuxuu kabaha badbaadada ee TR55 ka dhigayaa mid jajaban illaa heer sida kaliya looga yaqaanno dadka jilicsan.
Kuwa aadka u horumarsan Airtox style TR55 waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: WHITELAYER® - adag sida birta oo jilicsan sida ...